निर्वाचन नतिजा घोषणा गरिरहँदा अमेरिकी सिनेटमा लफडा : प्रदर्शनकारीद्वारा सभापतिको कुर्सी कब्जा ! | Diyopost
निर्वाचन नतिजा घोषणा गरिरहँदा अमेरिकी सिनेटमा लफडा : प्रदर्शनकारीद्वारा सभापतिको कुर्सी कब्जा !
एजेन्सी । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको घोषणा प्रक्रिया चलिरहेको बेला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समर्थक भिडले सिनेट कब्जा गरेको छ ।
क्यापिटलहिल स्थित सिनेटमा प्रवेश गरेको भिडले ताल्चा र ढोका फोडेका छन् । प्रदर्शनकारीहरुले सिनेटको सभापतिको सिट समेत कब्जा गरेर आफू बसेका तस्विरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।